सबै स्थानको मत परिणाम सार्वजनिक, कसले कहाँ जिते ? – Lokpati.com
नेकपा सरकार मृत्यु केपी शर्मा ओली पक्राउ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड नेपाल प्रहरी प्रचण्ड राशिफल चितवन अमेरिका प्रधानमन्त्री अपराध नेपाली काँग्रेस
सबै स्थानको मत परिणाम सार्वजनिक, कसले कहाँ जिते ?
काठमाडौं, १६ मंसिर। शनिवार सम्पन्न उपनिर्वाचनको मत गणना सम्पन्न भएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर र धरानकै वडा नम्बर ७ को वडाध्यक्षको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै उपनिर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको हो।
धरानमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार तिलक राई २६,७०९ मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपाका प्रकाश राईले २३,९१४ मत पाए। ३७ जिल्लाका ५२ रिक्त पदका लागि भएको मतदानको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइरहँदा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले अग्रस्थान बनाएको छ भने दोस्रो स्थानमा प्रमूख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस रहेको छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कास्की क्षेत्र नम्बर २ सहित ३० स्थानमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवार विजयी भएका छन्। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत कास्की क्षेत्र नम्बर दुईमा भएको उपचुनावमा नेकपाकी उम्मेदवार विद्या भट्टराईले २४ हजार ३ सय मत पाएर विजयी भएकी छिन्। कांग्रेसका उम्मेदवार खेमराज पौडेललाई ८ हजार ४ सय ३ को अन्तरले पराजित गर्दै भट्टराईले जीत हात पारेकी हुन्।
नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार पौडेले १५ हजार ९ सय ९१ मत प्राप्त गरे। दाङ क्षेत्र नम्बर ३ को ख को उपचुनावमा नेकपाले जीत हात पारेको छ । नेकपाकी बिमलाकुमारी खत्री २४ हजार २८६ मत ल्याएर विजयी भएकी हुन्।
उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका केशवराज शर्माले १९ हजार १८२ मत ल्याए। यसअघि २०७४ सालको चुनावमा उक्त क्षेत्र नेकपाले जितेको थियो। प्रदेशसभा अन्तर्गत बागलुङ २ को ‘ख’ मा वाम गठवन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन्।
वाम गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाका खिम विक्रम शाही ११ हजार २ सय ३५ मतसहित विजयी भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी जीत शेरचनले ९ हजार १ सय ३८ मत पाए । भक्तपुरको प्रदेश १ ख मा नेपाली कांग्रेसले जितको छ। यसअघिको चुनावमा नेकपाले जितेको उक्त क्षेत्रमा कांग्रेसले जीत हात पारेको हो।
अन्तिम मत परिणामअनुसार कांग्रेस उम्मेदवार कृष्ण भँडेलले १३ हजार ४ सय ४९ मत पाएका छन्। उनका निकटतम प्रतिष्पर्धी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार देवीप्रसाद ढकालले ११ हजार २ सय ६ मत पाएका छन्। यस अघि यो क्षेत्र नेकपाले जितेको थियो। उपुचनाव भएका ३ गाउँपालिका अध्यक्ष र १ उपाध्यक्षमध्ये गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपाका उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने एक गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा नेकपाले जितेको छ।
पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका अध्यक्षमा नेकपाले जीत हात पारेको छ। संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका अध्यक्षमा नेकपाका तेजवहादुर पोखरेल निर्वाचित भएका छन् भने महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका अध्यक्षमा नेकपाका विक्रम चौधरी निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्षमा नेकपाकी रुपा शाही निर्वाचित भएकी छिन्।
पाँचथरको फिदिम नगरपालिका १ मा गजाधर राई, सङ्खुवासभा खाँदवारी नगरपालिका ३ भरतकुमार घिमिरे, भोजपुर पौवादुङ गाउँपालिका १ मा जितेन्द्र राई, खोटाङ साकेला गाउँपालिका ३ मा शिवकला राई, सिरहा कल्याणपुर नगरपालिका १२ मा दिलीपकुमार यादव, रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपालिका ५ मा कुलबहादुर बस्नेत, सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँपालिका ८ मा केदारनाथ आचार्य, काभ्रे धुलिखेल नगरपालिका २ मा देवप्रसाद कोइराला र काठमाडौं दक्षिणकाली नगरपालिका ३ मा नेकपाका उम्मेदवार शिवभक्ति बलामी विजयी भएका छन्।
लम्जुङ सुन्दरबजार नगरपालिका २ मा नवीनकुमार श्रेष्ठ, बागलुङ बडिगाड गाउँपालिका २ मा ढालप्रसाद शेरचन, नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व बौदीकाली गाउँपालिका ५ मा खिमबहादुर थापा, रोल्पा थवाङ गाउँपालिका १ मा जनकबहादुर बुढामगर, कञ्चनपुर पुनर्वास नगरपालिका ३ मा कृष्णबहादुर तामाङ, सल्यान कुमाख गाउँपालिका ५मा धर्मे बुढाथोकी, बैतडी पुर्चौडी गाउँपालिका ४ मा शैलेन्द्र धानुक, गुल्मी रुरु क्षेत्र गाउँपालिका ६ मा शोभाखर खनाल, प्यूठान नगरपालिका २ मा मुक्ति पोखरेल, डोटी आदर्श गाउँपालिका २ मा रामबहादुर बोहरा, अछाम मल्लेख गाउँपालिका ५ मा रमेशबहादुर खड्का र बाजुरा त्रिवेणी नगरपालिका १ को वडाध्यक्षमा पनि नेकपाकै उम्मेदवार मनराजे बुढा विजयी भएका छन्।
पाँचथर हिलिहाङ गाउँपालिका ७ मा तिलविक्रम इधिङ्गो, महोत्तरी बलवा नगरपालिका २ मा विपिन पजियार सुडी, रौतहट गढीमाई नगरपालिका २ मा दीपेन्द्र श्रेष्ठ, चितवन भरतपुर महानगरपालिका १६ मा अमृतराज हमाल, खैरहनी नगरपालिका ४ मा देवबहादुर बस्नेत, सोही नगरपालिका ५ मा प्रतिमा कार्की, बैतडी दोगडाकेदार गाउँपालिका ४ मा सुरेन्द्रप्रसाद भट्ट, अर्घाखाँची मालारानी गाउँपालिका ३ मा शोभाखर खनाल, दाङ घोराही उपमहानगरपालिका १६ मा ताराबहादुर डिसी र मोरङ धनपालथान गाउँपालिका २ मा नेपाली काङ्ग्रेसका वडाध्यक्षका उम्मेदवार नारायणप्रसाद साह निर्वाचित भएका हुन्।
राजपाका वडाध्यक्षका उम्मेदवार महोत्तरी मटिहानी नगरपालिका ६ मा रामबाबु नायक, कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिका १० मा मञ्जु मिश्र र सप्तरी छिन्नमस्ता गाउँपालिका ७ मा प्रमिलादेवी यादव विजयी भए।सर्लाही हरिपुर्वा नगरपालिका १ मा श्यामबाबु राय, बारा बारागढी गाउँपालिकामा सुरेशप्रसाद चौधरी र पर्सा प्रसौनी गाउँपालिका ५ मा समाजवादी पार्टीका वडाध्यक्षका उम्मेदवार रुपलालकुमार यादव निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
धरान उपमहानरपालिकाको मेयरमा तिलक राई विजयी
उपनिर्वाचनको नतिजाबारे साझा पार्टीले के भन्यो ?
जनतालाई अर्काे सास्ती : ५ दिनभित्र कर बुझाउन सरकारको ताकेता !
बजेट भाषण अघि नै १२२ विद्युतीय सवारी साधन छुटाइयो, कसले चुहायो सुचना?